येशू आफ्नो जन्म भन्दा अघि, विश्व स्विट्जरल्याण्डको विश्वव्यापी चर्च स्विजरल्याण्ड (WKG)
येशू जन्मनुभन्दा पहिले को थिए?
के येशू जन्मनुभन्दा अघि नै हुनुहुन्थ्यो? उहाँ मानव बन्नु भन्दा पहिले येशू को हुनुहुन्थ्यो? के उनी पुरानो नियमका देवता थिए? येशू को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न पहिला हामीले त्रिएकको आधारभूत शिक्षालाई बुझ्नुपर्दछ (ट्रिनिटी) बुझ्नुहोस् बाइबलले सिकाउँछ कि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र केवल एक जना हुनुहुन्छ। यसले हामीलाई भन्दछ कि जो कोही वा जे भए पनि येशू मानव हुनु अघि उहाँ पिताबाट अलग परमेश्वर हुन सक्नुहुन्नथ्यो। यद्यपि परमेश्वर एक प्राणी हुनुहुन्छ तर उहाँ सदासर्वदा अस्तित्वमा हुनुहुन्छ तीन समान र अनन्त व्यक्तित्वहरूमा जुन हामी पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको रूपमा जान्दछौं। त्रिएकको शिक्षाले कसरी परमेश्वरको स्वभावको वर्णन गर्दछ भनेर बुझ्न हामीले शब्द र व्यक्तित्वबीचको भिन्नतालाई बिर्सनु हुँदैन। भिन्नतालाई यसरी व्यक्त गरिएको थियो: भगवानको एउटै मात्र कुरा छ (अर्थात् उहाँको अस्तित्व), तर त्यहाँ तीन जना छन् जो एक परमेश्वर भित्र रहेको छ, त्यो हो, तीन दिव्य व्यक्ति - पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा।
जसलाई हामी एक ईश्वर भन्छौं, उहाँ पिताबाट अर्को छोरासम्म आफैमा शाश्वत सम्बन्ध हुनुहुन्छ। बुबा सधैं बुबा हुनुहुन्छ र छोरा सधैं छोरा नै हो। र पक्कै पनि पवित्र आत्मा सधैं पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। देवताका एक व्यक्तिले अर्को भन्दा अगाडि गरेनन्, न त एकजना मान्छेले अर्कोलाई प्रकृतिमा तुच्छ ठान्छ। तिनै व्यक्तिहरू - पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा - एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएकको शिक्षाले वर्णन गर्दछ कि येशू मानव बन्नु भन्दा पहिले कुनै पनि समयमा सृष्टि गरिएको थिएन, तर सदासर्वदा ईश्वरको रूपमा अस्तित्वमा थियो।
त्यसोभए त्यहाँ तीनवटा स्तम्भहरू छन् जुन त्रिएकको ज्ञानले प्रकृतिलाई बुझाउँछन्। पहिलो, त्यहाँ एक मात्र साँचो परमेश्वर, यहोवा हुनुहुन्छ (YHWH) पुरानो नियम वा नयाँ नियमको थियोस - अस्तित्वमा रहेका सबै थोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यस शिक्षाको दोस्रो खम्बा भनेको यो हो कि परमेश्वर तीन व्यक्तिहरू, जो पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। बुबा छोरा होइन, छोरा बुबा हो न पवित्र आत्मा, र पवित्र आत्मा बुबा वा छोरा हुनुहुन्न। तेस्रो स्तम्भले हामीलाई भन्दछ कि यी तीन भिन्न छन् (तर एक अर्काबाट अलग छैन), तर समान रूपमा एक ईश्वरीय अस्तित्व साझा, ईश्वर, र ती शाश्वत, समान र एकै प्रकृतिका छन्। तसर्थ, परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र एक जना पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ तीन व्यक्तिको बीचमा हुनुहुन्छ। हामी सधैं सावधान रहनुपर्दछ कि ईश्वरका मानिसहरूलाई मानव जगतका मानिसहरू नबनाउन, जहाँ एक व्यक्ति अर्कोबाट अलग छ।
यो मान्यता छ कि त्रिएकत्व को बारे मा भगवान को रूप मा केहि छ हाम्रो सीमित मानव समझ को परे छ। त्रिएकको रूपमा एकै भगवानको अस्तित्व कसरी सम्भव छ भनेर धर्मशास्त्रले हामीलाई वर्णन गर्दैन। यसले केवल पुष्टि गर्दछ कि यो केस हो। हो, बुबा र छोरा कसरी एक जना हुन सकिन्छ भनेर बुझ्न हामी मानिसलाई गाह्रो लाग्छ। त्यसकारण, हामीले त्रिएकको शिक्षाले बनाएको व्यक्ति र व्यक्तिको बीचको भिन्नतालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। यो भिन्नताले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र उहाँ तीन हुनुहुन्छ जुन मार्गको बीचमा भिन्नता छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, परमेश्वर सारमा हुनुहुन्छ र तीन व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ। यदि हामीले छलफलको क्रममा यो भिन्नतालाई दिमागमा राख्यौं भने हामी त्यसबाट जोगिनेछौं (तर वास्तवमा होइन) बाइबलीय सत्यमा विरोधाभास छ कि परमेश्वर तीन व्यक्तिहरूमा हुनुहुन्छ - पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा - अलमल्लमा पर्न।
एउटा शारीरिक अनुरूप, जे एक असिद्ध भए पनि, हामीलाई अझ राम्ररी बुझाउन सक्छ। त्यहाँ केवल एक शुद्ध प्रकाश छ - सेतो प्रकाश। तर सेतो बत्ती तीन मुख्य र colors्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ - रातो, हरियो र निलो। प्रत्येक तीन मुख्य र colors्गहरू अन्य मुख्य र from्गहरू भन्दा फरक छैनन - तिनीहरू एक उज्यालोमा सेता छन्। त्यहाँ एक मात्र प्रकाश छ, जुन हामी सेतो बत्ती भन्छौं, तर यो प्रकाशमा तीन फरक तर फरक मुख्य रंगहरू छन्।
माथिको विवरणले हामीलाई त्रिएकको आवाश्यक आधार दिन्छ, जसले हामीलाई येशू को हुनुभएको थियो वा उहाँ मानव बन्नु भन्दा पहिले के थियो भनेर बुझ्न परिप्रेक्ष्य दिन्छ। एकचोटि जब हामी एक ईश्वरको बीचमा रहेको सम्बन्धलाई बुझ्दछौं, हामी मानिस र उसको शारीरिक जन्म हुनु अघि येशू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन हामी अघि बढ्न सक्छौं।
यूहन्नाको सुसमाचारमा येशूको अनन्त प्रकृति र पूर्व-अस्तित्व
ख्रीष्टको पूर्व अस्तित्व यूहन्ना १: १-। मा स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, र वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, र परमेश्वर वचन हुनुहुन्थ्यो। १.२ सुरुमा पनि परमेश्वरसँग त्यस्तै थियो। १.1,1 सबै चीजहरू एक समानका द्वारा बनिएका हुन्, र ती नै बिना, बनाइएको जे पनि बनाइएको छैन। १,4 जीवन उहाँमा थियो…। यो ग्रीकमा यो शब्द वा लोगो हो जुन येशूमा मानिस भयो। पद १:: र वचन शरीर हुनुभयो र हामी माझ बास गर्नुभयो ...
अनन्त, गैर-सृष्टि गरिएको वचन जुन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, र अझै पनि परमेश्वरका व्यक्तित्वहरूमध्ये एक रूपमा, उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। ध्यान दिनुहोस् कि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र मानव बन्नुभयो। यो शब्द कहिल्यै अस्तित्वमा आएन, त्यो हो, यो शब्द बनिएन। उहाँ सधैं वचन वा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। शब्दको अस्तित्व अनन्त छ। यो सँधै अवस्थित छ।
जसरी डोनाल्ड क्लेओडले ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा वर्णन गरेका छन्: ऊ पहिल्यै अस्तित्वमा रहेको व्यक्तिको रूपमा पठाइएको छ, पठाईएको भएर अस्तित्वमा आएन भनेर (पी 55)। म्याकोड जारी राख्छ: नयाँ नियममा, येशूको अस्तित्व भनेको स्वर्गीय प्राणीको रूपमा उसको अघिल्लो वा अघिल्लो अस्तित्वको निरन्तरता हो। हाम्रो माझमा बास गरेको शब्द परमेश्वरसँग हुनुहुने शब्द जस्तै हो। एक व्यक्तिको रूपमा फेला पारिएको ख्रीष्ट उहाँ हुनुहुन्छ जो पहिले परमेश्वरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो (पी 63)। यो वचन वा परमेश्वरको पुत्र हो जसले शरीरलाई स्वीकार्नुहुन्छ, न कि पिता वा पवित्र आत्मालाई।
पुरानो नियममा, भगवानको लागि सबै भन्दा सामान्य नाम यहोवा हो, जुन हिब्रू व्यञ्जनहरू YHWH बाट आउँदछ। उहाँ परमेश्वरका लागि इस्राएलको राष्ट्रिय नाम हुनुहुन्थ्यो, अनन्त र स्व-अस्तित्वमा सृष्टिकर्ता। समय बित्दै जाँदा, यहूदीहरूले परमेश्वरको नाम, वाईएचडब्ल्यूएच, बोल्नलाई एकदम पवित्रको रूपमा देखे। हिब्रू शब्द adonai (मेरो प्रभु) वा Adonai, यसको सट्टामा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसकारण, उदाहरणको लागि, लुथर बाइबलमा यहोवा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ (ठूला अक्षरहरूमा) जहाँ YHWH हिब्रू धर्मशास्त्रमा देखा पर्दछ। पुरानो नियममा फेला परेको सबैभन्दा ठूलो नाम यहोवा हो - यो उहाँसँग सम्बन्धमा 6800 2500०० पटक प्रयोग गरिएको छ। पुरानो नियममा भगवानको अर्को नाम एलोहिम हो, जुन २ ,०० भन्दा बढी पटक प्रयोग गरिएको छ, भगवान, प्रभु भन्ने वाक्यांशमा (YHWHElohim)।
नयाँ नियममा त्यहाँ थुप्रै शास्त्रपदहरू छन् जहाँ लेखकहरूले पुरानो नियममा यहोवाको सन्दर्भमा दिएको भनाइलाई संकेत गर्छन्। नयाँ नियमका लेखकहरूको अभ्यास यति सामान्य छ कि हामी यसको महत्त्व बिर्सन्छौं। येशूमाथि यहोवालाई शास्त्र पदहरू लगाएर यी लेखकहरूले येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ कि मानव हुनुहुन्थ्यो भनेर संकेत गर्छ। हुन त, लेखकहरूले यो तुलना गरेकोमा हामी छक्क पर्नु पर्दैन किनभने येशू आफैले भनेका थिए कि पुरानो नियमका अंशहरू उनलाई उल्लेख गर्छन्। (लूका २,,२-24,25-२27; -44 47--5,39; यूहन्ना,,।---०; -40 45--46)
येशू अहंकार Eimi छ
यूहन्नाको सुसमाचारमा, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: अब यो हुनुभन्दा अघि म तिमीलाई भन्दछु, कि जब यो हुन्छ, तब विश्वास गर्छौ यो म हुँ। (यूहन्ना १:13,19:१) यो वाक्यांश कि म हुँ ग्रीक एग एमिमाको अनुवाद हो। यो वाक्यांश यूहन्नाको सुसमाचारमा २ 24 पटक देखा पर्दछ। कम्तिमा यी कथनहरु मध्ये सात कम्तिमा पूर्ण मानिन्छ किनकि तिनीहरुलाई यूहन्ना followed..6,35 मा जीवनको रोटी हुँ जस्तो वाक्यले पछ्याउँदैन। यी सात निरपेक्ष केसहरूमा कुनै वाक्य कथन छैन र म वाक्यको अन्त्यमा छु। यो संकेत गर्दछ कि येशू यो वाक्यांश एक नामको रूपमा उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर संकेत गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। सात अंकहरू यूहन्ना :8,24.28.58:२:13,19, २ 18,5.6::8 छन्; १.XNUMX.१;; १.XNUMX..XNUMX.। र।
यदि हामी यशैया :१:; मा फर्क्यौं भने; :41,4 43,10:१० र .46,4.।, हामी येशूको अहंकार eimi को रूप मा सन्दर्भको पृष्ठभूमि प्रयोग गर्न सक्छौं (म छु) यूहन्नाको सुसमाचारमा हेर्नुहोस्। यशैया :१: God मा परमेश्वर वा यहोवा यसो भन्नुहुन्छ: “म, परमप्रभु नै हुँ, अन्तमा म आदि हुँ। यशैया :41,4 43,10:१० मा उनी भन्छन्: म, म परमप्रभु हुँ, र पछि यो भनिएको छ: तिमी मेरा साक्षी हौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र म परमेश्वर हुँ। (V. 12) यशैया 46,4: God मा परमेश्वर औंल्याउनुहुन्छ (परमप्रभु) म जस्तो हुँ आफैंलाई चालू गर्नुहोस्।
यो हिब्रू वाक्यांश म हुँ यो पवित्र धर्मशास्त्रको ग्रीक संस्करण, सेप्टुआजिन्ट हो (जसलाई प्रेरितहरूले प्रयोग गरे) यशैया the१: in; Ego 41,4.१० र .43,10 46,4.। वाक्यांश एगो इमिसँग अनुवाद गरिएको यो प्रस्टै देखिन्छ कि येशूले त्यो म हुँ भन्ने अभिव्यक्त गर्नु भएको थियो किनभने उनीहरु परमेश्वरसंग सीधै छन् (यहोवा) तपाईंको बारेमा यशैयामा बयान। वास्तवमा, यूहन्नाले भने कि येशूले शरीरमा उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर भने (खण्ड यूहन्ना १.१.१1,1.14, जसले सुसमाचारको परिचय दिन्छ र वचनको ईश्वरीयता र अवतारको बारेमा कुरा गर्छ, हामीलाई यस तथ्यको लागि तयार गर्दछ)।
जोहान्सको अहंकार eimi (म हुँ) येशूको परिचय पनि प्रस्थान to मा पाउन सकिन्छ, जहाँ परमेश्वर आफैले आफूलाई म हुँ भनेर चिनाउनुभयो। त्यहाँ हामी पढ्छौं: परमेश्वर [हिब्रू प्रख्यात] मोशाले मोशालाई यसो भन्नुभयो: "म जे हुन्छु मँ हुँ। Ü। म को हुँ] तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “अब, इस्राएली मानिसहरूलाई भनः 'म तिमीहरू हुँ' भनेर उहाँले मलाई पठाउनु भयो। (V. 14) हामीले देख्यौं कि यूहन्नाको सुसमाचारले येशू र यहोवा, पुरानो नियममा परमेश्वरको नामको बीचमा स्पष्ट सम्बन्ध राख्छ। तर हामीले यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि यूहन्नाले पितासँग येशू बराबर हुनुहुन्न (अन्य सुसमाचारका पुस्तकहरूले गर्दैनन्)। उदाहरणको लागि, येशू बुबालाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ (यूहन्ना .17,1..15-) जोनले बुझे कि छोरा बुबाभन्दा फरक छ - र उसले यो पनि देख्छ कि दुबै पवित्र आत्माभन्दा फरक छन् (यूहन्ना ,,14,15.17.25; ,,15,26) किनकि यो हो, यूहन्नाले येशूलाई परमेश्वर वा प्रभु भनेर चिन्न सके (जब हामी उसको हिब्रू, पुरानो नियमको नामको बारेमा सोच्दछौं), परमेश्वरको प्रकृतिको त्रिएकको व्याख्या।
यसलाई फेरि पार गरौं किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ। येशू आफैले पुरानो नियमको म हुँ भनी परिचयलाई यूहन्नाले दोहोर्‍याए। त्यहाँ केवल एउटै परमेश्वर र यूहन्नाले यो बुझेका थिए त्यसैले हामी केवल यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि त्यहाँ दुईजना मानिसहरू हुनुपर्दछ जो एक जना परमेश्वर हुनुहुन्छ। (हामीले देख्यौं कि येशू, परमेश्वरको पुत्र, पिता भन्दा फरक हुनुहुन्छ)। अध्याय १-14-१ John मा जोन द्वारा छलफल गरिएको पवित्र आत्माको साथ, हामीसँग त्रिएकको लागि आधार छ। यूहन्नाले येशूलाई प्रभुसित चिन्ने सम्बन्धमा कुनै शंका हटाउन हामी यूहन्ना १२: 17 12,37--41१ उद्धृत गर्न सक्छौं, जहाँ यसो भनिएको छ:
यद्यपि उहाँ तिनीहरूको आँखाको सामु त्यस्तो संकेतहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्, १२..12,38 भविष्यवक्ता यशैयाको यो भनाइ थियो, जसले यसो भने: “प्रभु, हाम्रो प्रचारमा कसले विश्वास गर्छ? प्रभुको बाहुली कसलाई भनिएको छ? » १२..12,39 Therefore त्यसैले तिनीहरू विश्वास गर्न सकेनन्, किनकि यशैयाले फेरि भने: «१२.12,40 उहाँले तिनीहरूको आँखा अन्धा बनाउनुभयो र उनीहरूको हृदय हठी बनाउनुभयो, ताकि तिनीहरूले आँखाले नदेखून्, बुझ्दछन् र हृदयले रूपान्तरित गर्दछन्, र म तिनीहरूलाई मद्दत गर्दछु। । " १२::12,41१ यशैयाले यसो भने किनकि उनले आफ्नो महिमा देखेका थिए र उनीबारे बोलेका थिए। यूहन्नाले प्रयोग गरेको माथिका उद्धरणहरू यशैया 53,1 6,10: १ र:: १० को हो। पैगम्बर मूल रूपमा प्रभु सन्दर्भ मा यो शब्दहरू भने। यूहन्ना भन्छन् कि यशैयाले वास्तवमा के देखेका थिए येशूको महिमा थियो र उहाँ उनीबारे कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण प्रेरित यूहन्नाका लागि येशू शरीरमा प्रभु हुनुहुन्थ्यो। उनी जन्मिनु अघि, उनी प्रभु हुन्।
येशू नयाँ नियमका प्रभु हुनुहुन्छ
मर्कूसले यो सुसमाचार "येशूका पुत्र" येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो भनेर प्रचार गर्दै शुरू गरे। (मार्क १: १) त्यसपछि उनले मलाकी:: १ र यशैया 3,1०: from लाई निम्न शब्दहरूमा उद्धृत गरे: यशैया अगमवक्तामा लेखिएको छः “हेर, म आफ्नो दूतलाई तिम्रो अघि पठाउँछु, जसले तिम्रो बाटो तयार पार्छ।” «१,40,3 यो उजाडस्थानमा प्रचारकको स्वर हो: प्रभुको मार्ग तयार पार्नुहोस्, उनको आरोहण गर्नुहोस्!»। निस्सन्देह, यशैया .1,3०. in मा प्रभु परमप्रभु हुनुहुन्छ, इस्राएलको स्व-अस्तित्वमा रहेका ईश्वरको नाम।
माथि उल्लेख गरिएझैं मार्कले मलाकी 3,1..१ को पहिलो अंश उद्धृत गरे: हेर, म मेरो सन्देशवाहकलाई मेरो लागि बाटो तयार पार्न पठाउन चाहान्छु। (दूत यूहन्ना बप्तिस्ट हुन्)। मलाकीको अर्को वाक्य यस्तो छ: र चाँडै हामी उसको मन्दिरमा आउनेछौं जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो; अनि हेर, तपाईं त्यो करारको स्वर्गदूत आउनु भएको छ जसलाई तपाईले चाहानुहुन्छ, उहाँ आउनु हुँदैछ! प्रभु पक्कै पनि प्रभु हुनुहुन्छ। यस पदको पहिलो भाग उद्धृत गरेर, मार्कले मलाकीले यहोवाबारे बताउनुभएको कुराको पूर्ति हो भनेर संकेत गरे। मर्कूसले सुसमाचारको घोषणा गर्‍यो, जुन यो छ कि परमप्रभु परमेश्‍वर करारका दूतको रूपमा आउनुभएको छ। तर, मार्क भन्छन्, प्रभु येशू प्रभु हुनुहुन्छ।
रोमी १०: -10,9 -१० बाट हामी बुझ्छौं कि मसीहीहरू येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्छन्। पद १ to सम्मको प्रस्गले येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट पार्दछ, जसलाई सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन बोलाउनुपर्दछ। यस कुरामा जोड दिन पावलले जोएल २::10२ उद्धृत गरे: हरेक जसले प्रभुको नाम पुकार्छ उसले मुक्ति पाउँदछ (V. 13) यदि तपाईंले योएल २::2,32२ पढ्नुभयो भने, तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि येशूले यस पदबाट उद्धृत गर्नुभयो। तर पुरानो नियमको खण्डले भन्छ कि मुक्ति सबै नै हुन्छ जो प्रभुको नाममा पुकार्छन् - परमेश्वरको ईश्वरीय नाम। पावलको लागि हो, यो येशू हुनुहुन्छ जसलाई हामी मुक्ति पाउन भन्छौं।
फिलिप्पी २: -2,9 -११ मा हामी पढ्छौं कि येशूको एउटा नाम छ जुन सबै नाम भन्दा माथि छ, कि उहाँको नाममा सबै घुँडा टेक्नुपर्छ, र सबै भाषाहरूले येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नेछन्। यशैया :11 43,23:२ मा पावल यस भनाइको आधार गर्दछन्, जहाँ हामी निम्न पढ्छौं: मैले आफैले शपथ खाएको छु र मेरो मुखबाट धार्मिकता आयो, जुन एउटा शब्द बाँकी रहनेछ: मैले घुँडा टेक्नु पर्छ र सबै भाषाहरूमा शपथ खानुपर्‍यो र मलाई भन परमप्रभुमा मेरो धार्मिकता र शक्ति छ। पुरानो नियमको सन्दर्भमा, यो परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर हुनुहुन्छ जो आफैंले बोल्नुहुन्छ। उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ, “म बाहेक अरू ईश्वर छैन।
तर पावल यो भन्न हिचकिचाएनन् कि सबै घुँडाले येशूलाई घोप्टाउँछन् र सबै भाषाहरूले उसलाई स्वीकार गर्नेछन्। पावल केवल एक परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भएकोले उसले कुनै न कुनै तरिकाले येशूलाई प्रभुसित तुलना गर्नुपर्दछ। कसैले यो प्रश्न सोध्न सक्छ: यदि येशू यहोवा हुनुहुन्थ्यो भने, पुरानो नियममा पिता कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तथ्य यो हो कि हाम्रो त्रिएकको बुझाइ अनुसार बुबा र छोरा दुबै भगवान परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने तिनीहरू परमेश्वर हुन् (पवित्र आत्मा जस्तै)। ईश्वरका तीनै व्यक्तिहरू - पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा - एक ईश्वरीय अस्तित्व र एक ईश्वरीय नाम साझा गर्दछन्, जसलाई परमेश्वर, ईश्वर वा ईश्वर भनिन्छ।
हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रले येशूलाई प्रभुमा जोड्दछ
येशू पुरानो नियमका परमेश्वर, प्रभुसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट कथन भनेको हिब्रू १ हो, विशेष गरी पद 1-१२। १ अध्याय १ को पहिलो केहि पदहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा, यस बिषय हो (V. 2) परमेश्वरले पुत्रद्वारा संसारलाई [ब्रह्माण्ड] बनाउनुभयो र उहाँलाई सबै कुराको उत्तराधिकारी बनाउनुभयो (V. 2) छोरा उसको महिमाको प्रतिबिम्ब र आफ्नो स्वभावको प्रतिबिम्ब हो (V. 3) उहाँ आफ्नो कडा शब्दले सबै चीज बोक्नुहुन्छ (V. 3)
त्यसपछि हामी निम्न पदहरू 8-१२ मा पढ्छौं:
तर छोराबाट: "हे परमेश्वर, तपाईंको सिंहासन सदासर्वदा रहिरहन्छ, र धार्मिकताको राजदण्ड तपाईंको राज्यको राजदण्ड हो। 1,9 तपाईंले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभयो र अन्यायलाई घृणा गर्नुभयो; त्यसकारण, हे परमेश्वर, तपाईको भगवानले तपाईलाई खुशी पार्ने तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। १:१० र: «हे प्रभु, आदिमा तपाईंले पृथ्वीको स्थापना गर्नुभयो, र स्वर्ग तपाईंको हातका कामहरू हुन्। 1,10:1,11 तिनीहरू बितेर जानेछन्, तर तपाईं बाँच्नुहुनेछ। तिनीहरू सबै एक पुरानो झैं पुरानो हुन्छन्; १:१२ र तपाईं तिनीहरूलाई लुगा जस्तै रोल बनाउनुहुनेछ, तिनीहरू वस्त्र झैं परिवर्तन हुनेछन्। तर तपाईं उस्तै हुनुहुन्छ र तपाईंको वर्षहरूको अन्त्य हुँदैन। सर्वप्रथम हामीले याद गर्नुपर्दछ कि हिब्रू १ को सामग्री धेरै भजनहरूबाट आएको हो। छनौटमा दोस्रो खण्ड भजन १०२: 1,12--। बाट उद्धृत गरिएको छ। भजनसंग्रहको यो खण्ड, पुरानो नियमका ईश्वर, अस्तित्वमा रहेका सबै थोकका सृष्टिकर्ता यहोवालाई प्रस्टै बताइएको छ। वास्तवमा, भजन १०२ का सबै परमप्रभुका बारेमा छन्। तर हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रले यो विषयवस्तु येशूको लागि प्रयोग गर्दछ। त्यहाँ केवल एउटा सम्भाव्य निष्कर्ष छ: येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ वा प्रभु।
माथी इटालिकमा शब्दहरू नोट गर्नुहोस्। उनीहरूले देखाउँछन् कि हिब्रू १ मा छोरा, येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर र प्रभु दुवै भनिएको छ। हामी यो पनि देख्दछौं कि हे परमेश्वर, तपाईका परमेश्वर, सम्बोधन गरिएकोसँग परमप्रभुको सम्बन्ध थियो। त्यसकारण, दुबै ठेगाना र ठेगाना परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो केवल कसरी हुन सक्छ? यसको उत्तर निश्चित रूपमा हाम्रो त्रिएकको घोषणामा छ। बुबा परमेश्वर हुनुहुन्छ र छोरा पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। ती हिब्रू भाषामा परमेश्वर, वा यहोवा, एक जनाको तीन व्यक्तिको दुई हुन्।
हिब्रू १ ले येशूलाई ब्रह्माण्डको निर्माता र संरक्षकको रूपमा चित्रण गर्दछ। ऊ उस्तै रहन्छ (V. १२), वा सरल छ, कि हो, यसको सार अनन्त छ। येशू परमेश्वरको स्वभावको ठ्याक्कै समानता हुनुहुन्छ (V. 3) तसर्थ, उहाँ पनि भगवान हुनुपर्दछ। त्यसकारण हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रका लेखकहरूले परमेश्वर खण्डहरू लिन सक्नु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन (यहोवा) र येशूलाई संदर्भित। पृष्ठ १ 133-१134 मा बिर्सिएको ट्रिनिटीमा जेम्स ह्वाइटले यसलाई यसरी राख्दछ:
हिब्रूहरूलाई पत्र लेख्ने लेखकले यो खण्डलाई सल्टरबाट लिन अस्वीकार गरे - यो खण्ड जुन अनन्त सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफै वर्णन गर्न योग्य छ - र यसलाई येशू ख्रीष्टलाई स refer्केत गर्दै ... यसको मतलब के हो कि हिब्रूहरूलाई पत्र लेख्ने मानिससँग यो छ के एउटा खण्ड लिन सक्नुहुन्छ जुन केवल यहोवालाई लागू हुन्छ र त्यसपछि यो परमेश्वरको पुत्र, येशू ख्रीष्टसित सम्बन्धित छ? यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूले त्यस्तो पहिचान गर्नमा कुनै समस्या देखेनन् किनभने उनीहरू विश्वास गर्दछन् कि छोरा वास्तवमा परमप्रभुको अवतार हो।
येशूको लेखोटमा पत्रुसको अस्तित्व
अर्को उदाहरणलाई हेरौं कि नयाँ नियमका शास्त्रहरूले कसरी येशूलाई प्रभु, पुरानो नियमका प्रभु वा परमेश्वरसँग तुलना गर्छन्। प्रेरित पत्रुसले येशू नाम दिए, जीवित ढु stone्गा जसलाई मानिसहरूले अस्वीकार गरेका थिए, तर परमेश्वरले चुन्नुभएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ (१ पत्रुस १: २) येशू जिउँदो ढु stone्गा हुनुहुन्छ भनेर देखाउन उसले धर्मशास्त्रबाट निम्न तीन खण्ड उद्धृत गर्दछ:
हेर, मैले सियोनमा एउटा विशेष, बहुमूल्य आधारशिला राखेको छु; जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ उसलाई लाज मान्नु हुँदैन। " २.2,7 विश्वास गर्नेहरूका लागि यो बहुमूल्य छ; अविश्वासीहरूको लागि, तथापि, "ढु stone्गालाई निर्माणकर्ताहरूले अस्वीकार गरे र त्यो कुना ढु 2,8.्गा २.XNUMX बनेको छ, यो झगडा र ढु ann्गाको ढु rock्गा हो"; तिनीहरू उहाँमाथि विश्वासघात गर्दछन् किनभने तिनीहरूले वचनलाई विश्वास गर्दैनन्, जुन तिनीहरू के गर्न खोजिरहेका थिए भन्ने हो (१ पत्रुस २: -1 -१०)
अभिव्यक्ति यशैया २:28,16:१:118,22, भजन ११8,14: २२ र यशैया :8,14:१:8,14 बाट आएका हुन्। सबै केसहरूमा, कथनहरू तिनीहरूका पुरानो नियमको सन्दर्भमा प्रभु, वा यहोवालाई जनाउँछन्। उदाहरणका लागि, यशैया:१ मा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: तर सेनाहरूका परमप्रभुसँग योजना बनाऊ। यो तपाईंको डर र आतंक हुन दिनुहोस्। .XNUMX.१XNUMX ऊ इस्राएलको दुई घरका लागि चिन्ता र ठेस लाग्ने ढु block्गा र एउटा ढु rock्गा हुनेछ, जसले यरूशलेमका बासिन्दाहरूको निम्ति समस्या र एउटा पासो हुनेछ। (यशैया १:: १ 8,13-१-14)
नयाँ नियमका अन्य लेखकहरू जस्तै पत्रुसलाई पनि पुरानो नियमका प्रभु - इस्राएलका परमेश्वर, परमेश्वरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। प्रेरित पावलले रोमी 8,32: 33२--8,14 मा यशैया:१। उद्धृत गरे जसले यो देखाउँदछ कि अविश्वासी यहूदीहरूले ठेस खाएको येशू ठेस खानुहुन्छ।
नयाँ नियमका लेखकहरूका लागि, इस्रायलको चट्टान, प्रभु येशूमा मानव, चर्चको चट्टान भएको छ। जसरी पावलले इस्रायलका परमेश्‍वरको बारेमा भनेका थिए: र [ती इस्रायलीहरूले) सबैले उस्तै आत्मिक भोजन खाए र सबैले एउटै आत्मिक पानी पिए। किनभने तिनीहरू आत्मिक चट्टानबाट पिए जुन तिनीहरूले पछ्याए। तर चट्टान ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो।
येशू आफ्नो जन्म भन्दा अघि को हुनुहुन्थ्यो?